ရာသီကုန်မှာ ရာထူးစွန့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဇီဒန်းနေရာ ရီးရဲလ်နည်းပြသစ် ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲ? – Sports A2Z
ရာသီကုန်မှာ ရာထူးစွန့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဇီဒန်းနေရာ ရီးရဲလ်နည်းပြသစ် ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲ?
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နည်းပြဇီဒန်းဟာ ဒီရာသီအကုန်မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာတော့မယ်လို့ သူ့အသင်းသားတွေကို ကြိုတင်အသိပေးခဲ့ကြောင်း သိရပြီး Goal သတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရ သူဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ခြေလှမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က ဆီဗီလားအသင်းကို သရေကျပြီး လာလီဂါချန်ပီယံလုပွဲမှာ ​တီကိုရဲ့ ဖြတ်ချမှုကို ခံရတော့မယ်လို့ ထင်ခဲ့ရပေမယ့် လက်ရှိမှာ ဘီလ်ဘာအိုကို အနိုင်ကစားပြီး ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက်ကို လက်ကျန်တပွဲရှိနေတဲ့အတွင်း အဖြေထုတ်ရတော့မှာဖြစ်လို့ ဇီဒန်းက ဆီမြွန်နီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ထွက်ခတ်ခတ်ခဲ့မလားဆိုတာက အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
သတင်းတွေရဲ့အဆိုအရ လာမယ့် လာလီဂါလက်ကျန်တပွဲဟာ ဇီဒန်းအနေနဲ့ ရီးရဲလ်နည်းပြအနေနဲ့ ကိုင်တွယ်မယ့် နောက်ဆုံးပွဲစဥ်ဖြစ်လာမယ်လို့ သိရသလို ရီးရဲလ်နည်းပြရာထူးကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် တာဝန်စွန့်လွှတ်သွားတော့မှာပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်က လီဗာပူးလ်ကို ကိဗ်မြို့က ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ အနိုင်ယူပြီး ၃ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံအဖြစ် ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ချိန်မှာပဲ ရီးရဲလ်အသင်းကနေ ရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြင်သစ်သားဟာ သူ့ရဲ့ မိခင်ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့တဲ့ တူရင်ကလပ်အသင်းမှာ ဇီဒန်းဟာ အိုးလေဒီပရိသတ်တွေရဲ့ လေးစားမှုကို ခံယူခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ တူရင်မြေကို စွန့်ခွာရဖို့ သတင်းပြေးနေတဲ့ အန်ဒရေ ပီယာလိုရဲ့နေရာကို အစားထိုးဖို့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက သူ့ကို သေချာပေါက် ရည်မှန်းထားတယ်လို့လည်း သိရတယ်။
ရီးရဲလ်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၃ လုံး၊ လာလီဂါဖလား ၂ လုံးဆွတ်ခူးထားသူ ဇီဒန်းဟာ လာမယ့် ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ပွဲမှာ ရီးရဲလ်ကို မစွန့်ခွာခင် သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေထဲ လာလီဂါဖလားတလုံးကို ထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်မလားလို့ အဆုံးအဖြတ်ခံယူသွားတော့မှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ ၂ မှတ်သာကွာဟတဲ့ တီကိုနဲ့ရမှတ်ချင်း တူညီနိုင်ခဲ့ရင်ကို Head to Head အသာရမှုအရ ဇီဒန်းက ဒီဖလားကို သိမ်းပိုက်သွားနိုင်တော့မှာပါ။
သူ့ရဲ့နေရာကို ဆက်ခံဖို့ ဒီရာသီကုန်မှာ ဘိုင်ယန်ကနေ ထွက်ခွာမယ့် ဟန်ဆီဖလစ်၊ အဲဗာတန်နည်းပြ ကာလို အန်ဆယ်လော့တီ၊ နွေရာသီမှာ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်ဖွယ်ရှိနေတဲ့ ဂျိုအာခင်မ် လော့ဗ်တို့နဲ့အတူ ရီးရဲလ်ရဲ့ ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ရာအူးလ် ဂွန်ဇာလက်ဇ်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြဟောင်း အယ်လီဂရီတို့က ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေပြီး ဒါဟာ ပီရက်ဇ်ရဲ့စိတ်​ကြိုက်အဖြစ်ဆုံး နည်းပြစာရင်းလို့လည်း သိရပါတယ်။
ZAWGYI: ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပဇီဒန္းဟာ ဒီရာသီအကုန္မွာ အသင္းကေန ထြက္ခြာေတာ့မယ္လို႔ သူ႔အသင္းသားေတြကို ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး Goal သတင္းရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရ သူဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဆီ ေျခလွမ္းေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့တပတ္က ဆီဗီလားအသင္းကို သေရက်ၿပီး လာလီဂါခ်န္ပီယံလုပြဲမွာ ​တီကိုရဲ႕ ျဖတ္ခ်မႈကို ခံရေတာ့မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ရေပမယ့္ လက္ရွိမွာ ဘီလ္ဘာအိုကို အႏိုင္ကစားၿပီး ခ်န္ပီယံေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို လက္က်န္တပြဲရွိေနတဲ့အတြင္း အေျဖထုတ္ရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ဇီဒန္းက ဆီႁမြန္နီကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထြက္ခတ္ခတ္ခဲ့မလားဆိုတာက အေတာ္ေလးစိတ္ဝင္စားစရာပါ။
သတင္းေတြရဲ႕အဆိုအရ လာမယ့္ လာလီဂါလက္က်န္တပြဲဟာ ဇီဒန္းအေနနဲ႔ ရီးရဲလ္နည္းျပအေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္မယ့္ ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ သိရသလို ရီးရဲလ္နည္းျပရာထူးကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ တာဝန္စြန္႔လႊတ္သြားေတာ့မွာပါ။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္က လီဗာပူးလ္ကို ကိဗ္ၿမိဳ႕က ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖိုင္နယ္မွာ အႏိုင္ယူၿပီး ၃ ႏွစ္ဆက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ေ႐ႊထီးေဆာင္းခဲ့ခ်ိန္မွာပဲ ရီးရဲလ္အသင္းကေန ႐ုတ္တရက္ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပင္သစ္သားဟာ သူ႔ရဲ႕ မိခင္ကလပ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ ဆႏၵရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ ကစားခဲ့တဲ့ တူရင္ကလပ္အသင္းမွာ ဇီဒန္းဟာ အိုးေလဒီပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေလးစားမႈကို ခံယူခဲ့ရသူလည္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ တူရင္ေျမကို စြန္႔ခြာရဖို႔ သတင္းေျပးေနတဲ့ အန္ဒေရ ပီယာလိုရဲ႕ေနရာကို အစားထိုးဖို႔ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းက သူ႔ကို ေသခ်ာေပါက္ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔လည္း သိရတယ္။
ရီးရဲလ္အသင္းနဲ႔အတူ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား ၃ လုံး၊ လာလီဂါဖလား ၂ လုံးဆြတ္ခူးထားသူ ဇီဒန္းဟာ လာမယ့္ ဗီလာရီးရဲလ္နဲ႔ပြဲမွာ ရီးရဲလ္ကို မစြန္႔ခြာခင္ သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြထဲ လာလီဂါဖလားတလုံးကို ထပ္ေပါင္းထည့္ႏိုင္မလားလို႔ အဆုံးအျဖတ္ခံယူသြားေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး တကယ္လို႔ ၂ မွတ္သာကြာဟတဲ့ တီကိုနဲ႔ရမွတ္ခ်င္း တူညီႏိုင္ခဲ့ရင္ကို Head to Head အသာရမႈအရ ဇီဒန္းက ဒီဖလားကို သိမ္းပိုက္သြားႏိုင္ေတာ့မွာပါ။
သူ႔ရဲ႕ေနရာကို ဆက္ခံဖို႔ ဒီရာသီကုန္မွာ ဘိုင္ယန္ကေန ထြက္ခြာမယ့္ ဟန္ဆီဖလစ္၊ အဲဗာတန္နည္းျပ ကာလို အန္ဆယ္ေလာ့တီ၊ ေႏြရာသီမွာ အသင္းလက္မဲ့ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနတဲ့ ဂ်ိဳအာခင္မ္ ေလာ့ဗ္တို႔နဲ႔အတူ ရီးရဲလ္ရဲ႕ ဂႏၴဝင္တိုက္စစ္မႉးေဟာင္း ရာအူးလ္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္နဲ႔ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္နည္းျပေဟာင္း အယ္လီဂရီတို႔က ထိပ္ဆုံးက ေရပန္းစားေနၿပီး ဒါဟာ ပီရက္ဇ္ရဲ႕စိတ္​ႀကိဳက္အျဖစ္ဆုံး နည္းျပစာရင္းလို႔လည္း သိရပါတယ္။
အယ်လစ်ဆန် ဘက်ကာရဲ့ ကယ်တင်မှုနောက်မှာ လီဗာပူးလ်တို့ ဘာတွေေ မျှော်လင့်နိုင်ပြီလဲ
အားကစားလောကမှာ ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ ဝင်ငွေအရ ဘယ်နားမှာ ရပ်တည်နိုင်ကြသလဲ